Wixii ku saabsan dhammaan diyaaradaha iyo xayeeysiinta bogga bogga
xalin Wixii ku saabsan dhammaan diyaaradaha iyo xayeeysiinta bogga bogga
1 sano 6 bilood ka hor #830 by ingjen
Waxaan jeclaan lahaa in marka la soo bandhigo sawirada diyaaradaha la qaadi karo, sawirro badan oo gudaha ah ayaa la muujiyaa. Livery waa wax fiican oo xiiso leh, laakiin "clickables" waa mid la jecelyahay sida dibedda.
1 sano 6 bilood ka hor #831 by rikoooo
Waad ku mahadsantihiin inaad la wadaagto fikraddaada, waan ku raacsanahay adiga iyo mustaqbalkaba waxay ku siin doonaan shaashado badan iyo VC screenshots
Waxaan u furanahay inaan maqlo talooyin kale.
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: ingjen
1 sano 6 bilood ka hor #832 by ingjen
Tanx. Hadda dabayaaqadiisa jimcaha ah ee Norway. Waqtigan xaadirka ah waxaan ku socdaa buuraha 6000 ee Waqooyi Galbeed Degmada Norway.
1 sano 6 bilood ka hor #847 by groba
Hello, waxaan ahay halkan cusub, waxaana isku dayey inaan ku rakibo B727 loogu talagalay P3D v4, laakiin rakibuhu ma shaqeynayo.
Ma waxaan u baahanahay qalab gaar ah Win10?
Waad ku mahadsan tahay caawimadaada
1 sano 6 bilood ka hor #848 by N00b
Hi Groba, waxaa laga yaabaa inay isku dayaan inay ku ordaan habka iswaafajinta. FSX FSX, FSX-SE, iyo P3D qalabka rakiban ee aan taageersanayn 10.
1 sano 4 bilood ka hor #936 by DRCW
Maskaxda ku hay in P3D V4 ay ku dhejiso xayndaabyada ku jira faylka ku yaal dokumentiyadaada. Lockheed ayaa sidaas sameeyay markii ay dhacdey in aad dib u cusbooneysiiso barnaamijka, ma waayi doontid faylashaada faylashaada iyo inaad bilowdo. Marmarka qaarkood, rakibayaashu ma dhaqaajin karaan downloadkaaga. Tag dukumintiyadaada oo raadi feylka la calaamadiyey (Diyaari 3D v4 Add-ons "oo aad u furan tahay waa inaad haysataa faylka diyaaradaha ee halkaa ku duub oo ku dheji warqadda duulimaadkaaga ee ku yaal walxaha siman. diyaaradaha barnaamijka
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.317